Saturday March 14, 2020 - 16:15:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xildhibaannada mucaaradsan siyaasadda Farmaajo iyo kheyre ayaa ka digay isku day cusub oo hoggaanka dowladda uu ku doonayo waqti kororsi.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa qoraal uu ku faafiyay baraha bulshada ku sheegay in Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ay dajiyeen qorshayaal ay ku sameysanayaan ciidamo iyaga ugaar ah si ay ugu xoojistaan awoodooda siyaasadeed.
Wuxuu sheegay in maleeshiyaad farabadan oo Kheyre iyo Farmaajo ay geeyeen Sh/Hoose ay gummaad kala kulmeen Al Shabaab walina ay jirto cabsi ah in markale cagta lamariyo.
Mahad Salaad ayaa farriintiis ku caddeeyay in maleeshiyaad tababar loogu qaaday dalka Ereteria dib loogusoo celiyayay Muqdisho lana doonayo in lagu bedelo ilaalada madaxtooyada Villa Somalia si ay ugu adeegaan danaha Farmaajo iyo Fahad Yaasiin.
Hoos ka akhriso Farriinta Mahad Salaad
Qorsheyaasha daahsoon ee Madaxweyne Farmaajo iyo dagaal ku soo fool leh dadka reer Muqdisho.
W/Q Mahad Salaad